माइतीघर मण्डलाको सन्देश : प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड
माइतीघर मण्डलाको सन्देश : प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड - Nepal Talk
असार ४ गते माइतीघर मण्डलामा गुठी बिधेयकका विरुद्ध हजारऔं जनताले प्रदर्शन गरे। लोकतान्त्रमा त्यस्ता घटना स्वभाबिक देखिएता पनि त्यस घटानाले सरकार कमजोर हुँदै गैरहेको छ। गुठी बिधेयक विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्रेस नै उभिए पछि अन्य सबै खाले असन्तुष्टि र चाहनाहरुको संयोजन थियो माइतीघर प्रदर्शन। यसको प्रमुख कारण हो प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली। नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता चाहेर नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लाई बहुमत दिएका हुन्। त्यो बहुमत लाई दुइ तिहाइ बहुमतमा पुर्याएर जनता को सेवा , बिकास र समृद्धि तर्फ नलागी प्रधानमन्त्री सत्ता कब्जा गर्ने तर्फ लागेको आरोप लाग्न थाल्यो।
राजनीतिमा हार जीत समान्य कुरा हो। एउटै निर्बाचनको परिणाम राजनीतिको अन्तिम निस्कर्ष होइन र हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीमा सत्ताको भोक यसरी जाग्यो कि उनलाई मुलुकका राजनितिक , प्रशासनिक ,न्यायीक र सुरक्षा जस्ता सबै निकाय लाई आफनै माताहतमा राख्ने चाहना ब्यक्त भयो। त्यो नै उनको गलत प्रस्थान बिन्दु थियो। उनी सहमति अनुसार साँढे २ बर्ष को लागि प्रधानमन्त्री भएका हुन र उनको पार्टीले ५ बर्ष को लागि मात्र जनादेश प्राप्त गरेको हो। तर प्रधानमन्त्री ५० बर्षको तयारी गरे झै राज्यका सबै अंगहरुमा आफ्नो ब्यतिगत प्रभाव र पहुच बढाउन थाले। त्यो कुरा संसदीय मूल्य र मान्यता बिपरित थियो।
प्रधानमन्त्रीका यी कदम र कार्यशैली काङ्ग्रेस र अरु राजनीतिक दल लाई चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक हो, तर उनकै पार्टी कतीपय नेता र कार्याकर्ता लाई क्रुद्ध बनाउदै लग्यो। यस्ता सबै कार्यशैलीको एकीकृत प्रतिक्रिया र असन्तुष्टि हो असार ४ गते माइतीघर मण्डलाको भिड।त्याहाँ को को उपस्थित थिए ? कस्ता नारा लागे ? त्यसको चर्चा गरि रहनु अबस्यक रहेन। जुन स्वार्थका मानिसहरु आएका थिए ,स्वर्थ अनुसार नारा लाग्नु स्वभाबिक हो। खाली उनिहरुले गुठी बिधेयक विरुद्ध को ब्यानर र भेला लाई प्रयोग गरेका थिए। धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ नखोजे हुन्छ ‘ भनेर सरकारका मन्त्रीहरु नै भनी रहेका छन्।
पानी निरन्तर धमिलो पार्ने काम चाहिँ सरकार आफै गरीरहेको छ। अझै पनि सरकारले नेपाली काङ्ग्रेस संग बिस्वास ,सहमती र सहकार्या सुरु गर्न सकेन भने ,जनबिरोधी र मिडिया बिरोधी बिधेयक फिर्ता लिएन भने र प्रधानमन्त्री ले आफ्नो कार्यशैलीमा अबिलम्ब आजै बाट परिवर्तन ल्याएन भने मुलुक ठूलो दुर्घटनाको संघारमा पुग्न सक्छ। दुई तिहाइ बहुमत सरकारको कार्यकालमा नेत्र बिक्रम चन्द बिप्लबको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भैरहेको छ। यस तर्फ पनि सबैको ध्यान जानू जरुरी छ।
प्रधानमन्त्रीले आफुलाइ बदलेर भएपनी मुलुक लाई सहज निकास दिनु पर्दछ। प्रचण्ड लाई प्रधानमन्त्री बनाएर सहज हुन्छ भने त्यो निकास तर्फ अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री के पि ओलीले ढिला गर्नु हुदैन। नेकपाले नेपाली काङ्ग्रेस लगायत संबिधान ,लोकतान्त्र र परिवर्तनप्रति बिस्वास राख्ने राजनीतिक दलहरु संग सहमतीको हात फैलाउनु जरुरी छ। यो पंत्तिकाराले प्रारंभ देखि नै उठाउदै आएको एउटा ससक्त तथ्य के हो भने जसरी आन्दोलन ,शान्ती र संबिधानका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हरुको एकता अनिबार्य र अपरिहार्य रह्यो। त्यसरी नै संबिधान सफल कार्यान्वयन ,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को संस्थागत बिकास र मुलुकको समग्र बिकास एबं समृद्धिका लागि अझै केही दशक नेपाली काङ्रेश र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिच सहमती र सहाकार्य अत्यावश्यक रहन्छ।
नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शिर्स नेतृत्व तह संगको अनौपचारीक भेटघाट र कुराकानीमा पनि यी धारणा ब्यक्त गर्दै आएको अबस्था हो। हामी संग राजनितिक इतिहास तथ्यगतरुपमा जिवित छ। जब पार्टी हरु मिलेर अघि बढे उनिहरु सफल भएका छन्। जस्तै २००७ साल ,२०४६ साल र ०६२/६३ साल। जब दलहरु द्वन्द र बिभाजनमा गए लोकतान्त्र संकटमा परेको छ। जस्तै बि.सं.२०१७ साल २०५९ साल। यति बेला बल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कोर्टमा छ। संसदीय लोकतान्त्रमा प्रधानमन्त्री फेरिनु नौलो र ठूलो कुरा होइन। फेरि प्रधानमन्त्री पद लोकसेवाको जागिर होइन मैले यति बर्ष खानै पर्छ भन्ने हुदैन। यस बारेमा त घन श्याम भुसाल ,भिम रावल र राम कुमारी झाक्री लाई सोध्दा पनि काफी हुन्छ।
काङ्ग्रेस ले पनि केही नपाएर खामो चिथोर्ने काम गर्नु हुदैन। कम्युनिस्ट ले पनि कोही नपाएर काङ्ग्रेस लाई पेल्नु हुदैन। नेपथ्यामा डिजाइन भैरहेका कम्युनिस्ट पार्टी बिभाजन ,प्रधानमन्त्री परिबर्तन, मध्यावधी निर्बाचन ,प्रतिगमन जस्ता अस्थिरता र तरलतापुर्ण कुचेस्टा र चाहनाहरु लाई परास्त गर्न पनि कम्तीमा संबिधान पक्षधर राजनितिक दलहरु बिच न्युनतम सहमती को आबस्यकता देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सहमती आजको टडकारो आवश्यकता हो।